Amakhasino aku-inthanethi FastPay | Amakhasino Okukhokha Asheshayo 2021
Amakhasino aku-inthanethi FastPay
Ukukhethwa Kwemidlalo Nonjiniyela be-Fastpay Casino
Amabhonasi nezenyuso ku-Fastpay
Izindlela zokufaka nokukhipha imali
I-Fastpay online casino isisetshenziswa sokugembula ongakhuluma kakhulu ngaso futhi isikhathi eside. Kepha umbono wokuqala phakathi kwabagembuli wakhiwa ngemuva kokufunda leli gama, ngoba kuyizinkokhelo ezisheshayo okuyisimo esibalulekile kuzo zonke izivakashi zenhlangano yokugembula ebonakalayo. UDirex N.V. bazi ngalokhu futhi basebenza ngokuzethemba ekuthuthukiseni insizakalo - kulapho amakhasimende angathola khona ama-winnings kuze kube yimizuzu engu-15. Lesi isikhathi sokurekhoda, iningi lezinsizakusebenza zokugembula ezidumile elingeke liziqhayise ngalo.
Iya ekhasino uyofuna ibhonasi
I-Fastpay Casino ibisebenza kusuka ngo-2018, okungukuthi, isivele isizinzile futhi yathola impendulo evela kubavakashi abavamile beya kuwebhusayithi esemthethweni. Akudingeki ukusho, iningi labo lihle. Lokhu kusobala, ngoba ngaphezu kokukhokha okusheshayo eklabhini eliku-inthanethi, baphinde banikeze ukufinyelela kwiqoqo elibanzi lemishini yama-slot, ukukhushulwa okunenzuzo, amabhonasi nama-raffles amachibi emiklomelo emikhulu. Ngamanye amagama, le ndawo kanye lapho ukuzilibazisa kwakho okuthandayo kukuvumela ukuthi wenze imali yangempela.
Impumelelo yanoma yikuphi ukusungulwa kokugembula incike esimweni sokuphatha enhlanganweni yomsebenzi wayo. Konke okuku-Fastpay online casino kucatshangelwa ukunethezeka okuphezulu kwezivakashi - umklamo uyakhanga futhi awubonakali, ukuhamba kulula kakhulu, isiza lihleleke kahle, ungathola ngokushesha izingxenye ezidingekayo nolwazi oludingekayo kumenyu.
Izigaba eziyinhloko ku-Fastpay:
"Mayelana nathi" - imininingwane ngabanikazi beklabhu, izici zomsebenzi wayo, oxhumana nabo, ilayisense;
"Izinkokhelo" - imininingwane emayelana nezindlela zokukhokha, izimali, amakhomishini, imigomo yokwenziwayo;
"Promo" - amaphromoshini, amabhonasi, imiqhudelwano, ama-sweepstake nohlelo lokwethembeka;
"Ukusekelwa" - izindlela zokuxhumana okusheshayo ngokusekelwa nezimpendulo zemibuzo ebuzwa njalo kubadlali.
Lapho ibha yokusesha umdlalo itholakala kusayithi, kukhona futhi izingxenye ezengeziwe lapho, ukuze kube lula, isoftware evela eqoqweni leklabhu ihlelwa. Lokhu:
Izikhala - imishini yama-slot yakudala enama-reels, imigqa namabhonasi wendabuko;
"Imidlalo emisha" - izinto ezintsha ezivela kubakhiqizi abathembekile;
"Bukhoma" - isoftware yokudlala nomthengisi wangempela;
"Thenga Isici" - amabhonasi abadlali abangawathenga ngokungeziwe;
"I-Bitcoin, i-ETH, i-LTC" - imidlalo lapho kubhejwa khona nge-idijithali yemali.
Izithonjana zemikhakha ephezulu ziboniswa ekhasini eliyinhloko. Lapho ungabona futhi amagama abaphumelele ekugcineni, usayizi wabanqobile, amagama emidlalo lapho kudlalwa khona i-jackpot eqhubekayo. Ekhoneni elingezansi kwesokudla lesiza kunenkinobho yokubonisa iwindi ngengxoxo eku-inthanethi - ungabhala lapho uma kunemibuzo ephuthumayo nokuxazululwa kwezingxabano ngokushesha.
Uma ngandlela thile ukufinyelela endaweni ye-Fastpay online yekhasino kungahle kube nomkhawulo, ungafaka i-akhawunti yakho yangasese, futhi ufinyelele ukusebenza ne-akhawunti usebenzisa isibuko. Le yikhophi eliphelele lewebhusayithi esemthethweni yesikhungo, lapho kukhona yonke imidlalo efanayo, amabhonasi nezinye izici zomthombo oyinhloko.
Ukubhalisa i-akhawunti entsha, kwanele ukugcwalisa ifomu elijwayelekile ngokuchofoza kunkinobho ethi"Bhalisa" ekhoneni eliphezulu lesiza. Ithi:
Esigabeni esifanayo, kuyadingeka ukuqinisekisa iminyaka yakho, ngoba ngabantu abafinyelele eminyakeni engu-18 kuphela abangadlala ekhasino. Iklayenti elisha kufanele futhi livume imigomo nemibandela yomthombo, futhi, uma lifuna, livume ukusatshalaliswa kokunikezwa kwephromoshini kanye nezindaba zeklabhu.
Ngaphambi kokukhipha imali okokuqala kwi-akhawunti, kubalulekile futhi ukuthi uhambe ngenqubo yokuqinisekisa i-akhawunti ngokunikeza abaphathi amakhophi omazisi. Lokhu kungaba isithombe esicacile sepasipoti noma ilayisense yokushayela, izitatimende zasebhange, isithombe sekhadi lasebhange uma belisetshenziselwa ukufaka imali. Ukuqinisekiswa kwemibhalo kuthatha ubuncane besikhathi - kuze kufike emizuzwini eyi-10, ngemuva kwalokho ungafaka isicelo sokukhishwa kwemali kubhalansi ngokushesha.
Ububanzi bamakhasino we-Fastpay afaka imishini engaphezulu kuka-2000 yemishini. Konke lokhu kungukucabanga kwabakhiqizi abathembekile abazibonakalise besuka ohlangothini oluhamba phambili - iBooongo, iNetEnt, iMicrogaming, iYggdrasil, i-Igrosoft, i-Amatic, i-Endorphina, iPragmatic Play nabanye. Ukuze kube lula ukusesha, izihlungi eziningana zinikezwa ngasikhathi sinye, kucatshangelwa izici zobuchwepheshe zesoftware. Imikhiqizo emisha ibhalwe ukuthi"Okusha" futhi ngaphezu kwalokho kunendlela yokusesha ngegama.
Izikhala zakudala yisigaba semidlalo ebanzi kunazo zonke kuwebhusayithi yeklabhu. Iqoqo lifaka nemidlalo engaba ngu-140 eguqulwe yaba yifomethi yomthengisi bukhoma (imikhiqizo evela kwa-NetEnt Live, abahlinzeki be-Evolution). Esigabeni sokugcina, ungathola izinhlobo eziningana ze-poker, i-roulette neminye imidlalo yokugembula ngasikhathi sinye - okufana nalokho okutholakala emahholo wangempela.
Uhlelo lwe-Fastpay bonus lwenzelwe amakhasimende amasha asebenza njalo. Bobabili banelungelo lokuthola imivuzo enenzuzo, ekhishwa ngokuya ngesimo esitholwe ngesikhathi somdlalo. Izinga lokuqala linikezwa abagembuli ngokuzenzakalela, futhi ngokwanda kwesimo kuze kufike ku-11 ophakeme kakhulu (Omnyama), ukusebenza okutholakalayo kuyanda - abadlali bangalindela ukuthola iphesenti eliphakeme lembuyiselo kwizimali ezilahlekile, usizo oluvela kumphathi womuntu kanye nokunye amabhanisi awusizo. Amaphoyinti wesipiliyoni, adingeka ukukhuphula izinga legeyimu, angatholakala ngokufaka imali nokubheja ezindaweni zokubeka.
Ukukhokha okusheshayo, okuboniswa egameni lesayithi, kuyisici sayo esiyinhloko. Ngokuya ngemigomo yesisetshenziswa, kunikelwa ubuningi bamahora ambalwa wokucubungula izicelo zokwenza ukuthengiselana kwemali. Inqubo yokuqinisekisa, njengoba kushiwo ngenhla, ithatha imizuzu eyi-10. Kunezinhlobo zezimali ezi-9 ezihlukene kanye nemali eyi-5 edijithali etholakalayo kusayithi yokugcina i-akhawunti nokubheja emidlalweni.
Izindlela zokukhokha ezitholakalayo ukusebenza ngamakhadi asebhange, izikhwama zezinhlelo zokukhokha nge-elekthronikhi, ama-akhawunti opharetha beselula kanye nezikhwama ze-cryptocurrency. Ngendlela ngayinye, kunezikhathi ezihlukile (ngemuva kokucubungula isicelo ngokuphathwa kwekhasino eku-inthanethi i-Fastpay) nemikhawulo. Ayikho ikhomishini ekhokhiswayo. Ngemuva kokwenza idiphozi, imali ingasetshenziselwa ukubheja emidlalweni ngokushesha.